युगसम्बाद साप्ताहिक - संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 02.19.2020, 10:14pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 03.18.2019, 04:42pm (GMT+5.5)
एकीकरण अघि नेपाल ५०–५५ टुक्रामा विभाजित थियो । भारतमा ५६५ राज्य थिए । चीनमा झण्डै ६ सय राज्य थिए । जर्मनीमा १३ सय थिए भनिन्छ । यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रे राज्यलाई जोडेर सग्लो राष्ट्र नेपाल बनाए । अरु देशले पनि सकेसम्म विभाजित टुक्राहरु जोडे । संसारभरि नै जात र भाषाकै कारण झगडा भएर देशहरु टुक्रिएको इतिहास छ । पूर्वी यूरोपकै सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, बेल्जियम नै उदाहरण छन् । भारत पनि जातीयताकै आधारमा दुई टुक्रा भयो, पाकिस्तानको । यी पुराना उदाहरणबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने हो ।
‘संघ’ भनेको समूह हो । टुक्राटुक्रा जोडेर समूह बन्छ । समूह बलियो हुन्छ भने एउटा एउटा त्यान्द्रो कमजोर हुन्छ । यो वास्तविकता सामान्यले त बुझेको हुन्छ भने नेताले नबुझ्ने कुरै भएन । तर, उनीहरु बाहिरियाका मच्याटमा आँखा चिम्लिरहेका छन् । संघ त संस्था हो, धेरै जोडिएर मात्रै संस्था बनेको हुन्छ । टुक्राटुक्रालाई संघ भनिंदैन । पूर्व सोभियत संघ वास्तवमै संघ थियो, त्यो टुक्रियो । नेपाललाई पनि आज टुक्र्याएका छन् । धेरै टुक्रे राज्य जोडेर बनेको नेपाल यथार्थमै संघराज्य थियो, अब रहेन । आज त टुक्राटुक्रा पारिएको छ । अब नेपाललाई धेरै राज्यमा बाँडेर धेरैजनालाई छोटे राजा–रजौटा बनाउने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको छ ।
जोडिएको बस्तु बलियो हुन्छ कि फुटेको ? यो त मूर्खले पनि बुझ्ने कुरा हो, तर नेताहरु स्वार्थवश बुझपचाइरहेका छन् । देश र जनतालाई धोका दिइरहेका छन् । जसले जे माग्छ त्यही दिन्छौं, जातैपिच्छे राज्य दिन्छौं भन्दै उत्ताउलो काम गरेर माओवादीले रोपेको विखण्डनको बीउ हो संघीयता । एमाले र कांग्रेस त्यही थाङ्नो समाल्न पुगेका हुन् । आजको भाँडभैलो त्यसेको परिणाम हो । भाँड्न त सजिलै हुन्छ, समाल्न पो गाह्रो ।्
साम्राज्यवादीका चकचकीका बेलामा समेत आफ्नो पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन समर्थ नेपाल आज नेताहरुकै अविवेकले गर्दा संकटमा पर्न लागेको छ । नेपाललाई जातीयताका भुमरीमा पार्न लागेका छन् । जातीय राजनीति माक्र्ववाद विरोधी राजनीति हो । शोषक र शोषित बाहेक अरु कुनै वर्ग छैन माक्र्सवादमा । उनले जाति, भाषा र धर्मको आधार मान्दैनन् । जातीय राजनीतिले समाजलाई छिन्नभिन्न र कमजोर पार्छ भन्ने माक्र्स, तर उनैको अनुयायी हौं भन्ने नेपालका कम्युनिष्ट जातीय राजनीति गरेर देशलाई टुक्र्याउन हिंडेका छन् । ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ भनेझैं जातीय नाम लिंदा जनता चिढिएको बुझेपछि ‘पहिचान’ शब्द जोडेका भए पनि आन्तरिक मनसाय जातीय राजनीति गरेर सत्ता कब्जा गर्ने नै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यसरी जनतालाई झुक्याउने र अर्थको अनर्थ गर्दै चक्र घुमाइरहेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै यहाँ एकात्मक रुपको संघीय शासन चलेर आएको हो । तर, आज भनिएको संघीय शासन चाहिं एकतालाई फोरेर टुक्राटुक्रा पारिएको संघीयता हो । यसलाई संघराज्य भन्नै मिल्दैन । फोरेर टुक्रा पारेकोलाई सग्लो भन्नु र आजका विभाजित राज्यहरुलाई संघ भन्नु ‘हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै’ भनेजस्तै हो । गाउ–नगरपालिका जस्ता स्थानीय संस्थाहरुलाई बढी अधिकार दिनुपर्नेमा यहाँ त प्रदेशका नाममा राज्यहरु बाँडेर आफैंले खाने मेलो गर्नुलाई नेताहरुले संघराज्य भन्नु सुहाउँदो भएन भनिरहेका छन् जनताले ।
राज्य टुक्र्याएपछि साधन स्रोतको कमी मात्रै होइन, अभावै पनि हुनसक्छ । सामूहिक हितको सोच र शक्ति पनि हराउँदै जान्छ । भारतमा जस्तो पहिलेदेखि नै अलग अलग रियासतका रुपमा रहेका राज्य हामीकहाँ थिएनन् । त्यसैले आज फोरेर संघराज्य बनाउनुभन्दा बरु जिल्लाहरुलाई नै बढी अधिकार विकेन्द्रित गरिदिएका भए देश बलियो हुन्थ्यो । आज भनिएको संघराज्यका जटिलता नबुझेर लहैलहैमा लागेको परिणाम राम्रो पक्कै हुने छैन । नेपालको संयुक्त स्वरुप टुक्र्याएर देशलाई कमजोर पारिदिने विदेशी षड्यन्त्र नेताले नबुझेका भन्न त मिल्दैन, तर स्वार्थले गर्दा देशलाई धोकामा पारे ।
निष्पक्ष भएर सोचौं त– पृथ्वीनारायण शाहले ती टुक्रे राज्व्यहरुलाई जोडेर नेपाल राष्ट्र खडा नगरिदिएका भए आज नेपाल हुन्थ्यो ? हामी कहाँ हुन्थ्यौं होला ? नेताले स्वार्थवश नसोचेर आँखा चिम्ले पनि जनताका मनमा यो यथार्थ गहिरोसंग गडेको छ । आज जनतालाई चाहिएको अधिकार हो, समानता हो, समान अवसर हो, आजको जस्ता टुक्रे राज्य जनताले खोजेका होइनन् । यथार्थमा संघमा आइपर्ने समस्या र जटिलता त जनताले अब पो विस्तारै बुझ्दैछन् ।
संघीय शासनका नाममा आज एकातिर देश टुक्र्याउने काम भएको छ भने अर्कातिर विना सुविधा, विना सहयोग एकाएक जनतामाथि नचाहिंदा कर दस्तुर थोपरेर आतंक सिर्जना गरिएको छ । तिरो तिर्न परेपछि त्यसको औचित्य पनि देखिनुप¥यो नि । विना मेसै, विना सहुलियन जनता निचोरेर खैराते नेताका सुख सुविधा पु¥याउने काम गरिन्छ भने कति दिन सह्य होला ? मैले सरकारबाट के सुविधा पाएँ र त्यसतो कर तिरें ? भनेर जनता आश्वस्त हुने ठाउँ पनि त चाहियो नि ?
आजका सन्दर्भमा संघीय राज्यका क्रममाा देखा पर्दैजाने जटिलता, व्यवधान र असुविधालाई ध्यानै नदिई यो सानो देशलाई टुक्र्याएर संघराज्यहरु खडा गर्ने मुख्र्याईले अब पाइला पाइलामा धोका खानुपर्ने दिन आउनेछन् भन्ने कुरा तुनामा बाँधेर राखे हुन्छ । केन्द्रले दृष्टि पु¥याउन र समाल्न नसक्ने अवस्थामा केही ठूलाा देशमा जस्तो नक्कल गर्न खोजेर यो सानो देश सुहाउँदो काम भएन । बनाउन पो गाह्रो, विगार्न कतिबेर लाग्छ र ? चेतना भया !
अन्त्यमा दामोदर पुडासैनिको कविता–
“देश हाँक्छु भन्नेहरु नै
टुक्राटुक्रा पार्न खोज्दैछन् देशको मानचित्रलाई
उनीहरु छिनाल्न खोज्दैछन् सारंगीको तारलाई
र, क्षतविक्षत पार्न खोज्दैछन्–
भूगोलमा, जातमा र रंगमा ।”